February 2015 - Myanmar News Plus
ရာသီဥတု ပူလွန်း၊ အေးလွန်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူဓာတ်များသူတွေမှာ သိသိသာသာ နှုတ်ခမ်းအ သားပပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်လည်း နှုတ်ခမ်းအသားပပ်တဲ့ဝေဒနာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသားပပ်တဲ့အခါ နာကျင်ခံစားရုံမျှမက အလှပျက်၍ ဆွဲဆောင်မှုမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ သို့သော်စိတ်မပူပါနှင့်။ အောက်ပါရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အိမ်တွင်းကုထုံးလေးများက နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ပကတိ အတိုင်း စိုအိချော မွေ့စေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ (၁) ရေပိုသောက်ပါ။(လက်ရှိသောက်နေကျ ရေပမာဏထက် နှစ်ဆတိုး၍သောက်ပါ။ ရေခဲရေ မသောက်ရ။) (၂) ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်လာဥနီ၊ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို များများစားပေးပါ။ (၃) ဗီတာမင်အားဆေးများဖြစ်ကြတဲ့ ဗီတာမင်B2၊ ဗီတာမင်C၊ ဗီတာမင် E၊ ငါးကြီးဆီ ဆေးလုံးများမှီဝဲပါ။ (၄) သခွားသီးပါးပါးလှီး၍ ကပ်ပေးပါ။ (၅) ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ရေနွေး၊ ဟင်းရည်၊ စွပ်ပြုတ်တို့ကို အအေးခံ၍ သောက်ပါ။ […]
ဆရာရှင့် ခုတစ်ခါ ကျမရဲ့အမပါ။ အသက်ကတော့ ၃၄ နစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကလေးတစ် ယောက် ရပြီ။ နှာချေ တဲ့ အခါတို့ချောင်းဆိုးတဲ့အခါတို့မှာ ဆီးမထိန်းနိင်ပါရှင့်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ညွှန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကလေးတိုင်းဟာ အသက် ၅-၆ နှစ်ဆိုရင် ဆီးကို ထိန်းနိုင်လာကြပြီ။ သွားရမဲ့နေရာကြမှသာ ဆီးသွား တတ်လာမယ်။ တလထဲမှာ ၂ ခါလောက် အိပ်ရာထဲရှူပါရင် Bed wetting (Enuresis) ခေါ်တယ်။ စိတ်ဖိအားများရင်၊ ကြောက်စိတ်ဝင်ရင် လူကြီးတွေထဲက အမျိုးသမီးတွေပိုဖြစ်ကြတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်း တည်ဆောက်ထားပုံ၊ ကလေးမွးဖွါးရတာ၊ သွေးဆုံးတာ၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာတွေကြောင့် ပိုများရတယ်။ သန်းပေါင်းများစွာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်နေကြတယ်။ အာရုံကြောထိခိုင်ရင် ကျားရော မပါဖြစ်တယ်။ ဆီးလမ်းကိုထိန်းပေးနေတဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေမှာ တခုခုဖြစ်လို့ဖြစ်ကြရတယ်။ […]
အိမ်ထောင်မပြုသောအမျိုးသမီးများ နှလုံးရောဂါဖြင့် သေဆုံးနိုင်ခြေပိုများ
အိမ်ထောင် ရှိ၊ မရှိဆိုသည့် အခြေအ နေသည် နှလုံးရောဂါဖြင့် သေဆုံးသည့် အန္တရာယ်အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင် ဟန်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အိမ်ထောင်မပြုသည့် အ မျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်ရှိသည့် အမျိုး သမီးများ ထက် နှလုံးရောဂါဖြင့် သေဆုံးရန် ပို၍ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယူကေရှိ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ သုတေသနအ သစ်တစ်ခုက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအကြောင်း မကြာသေးမီက BMC Medicine ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယခင်သုတေသနတစ်ခုတွင်လည်း အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားများက အိမ်ထောင် မရှိ အမျိုးသားများထက် နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုအန္တရာယ် ပို၍နိမ့်ကြောင်း တွေ့ ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးများ ကြား ယခုကဲ့သို့ ဆက်စပ်မှုအား အကဲဖြတ် သည့် ကြီးမားသည့်လေ့လာမှု များများစား စားမရှိဟု ဆာရာ […]
ယောက်ျားတစ်ယောက် သင့်ကို ချစ် မချစ် သိလိုပါသလား?
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ အချစ်ကို သိလိုပါလျှင်…. သင့်ကို ” ကြိုက်” တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သင် ရှိရာ အရပ်ကို ရောက်အောင်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို အကြောင်းပြချက် တစ်ခုခုကြောင့်ဆိုပြီး အရင်စ ဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို “ချစ်” တဲ့ ယောက်ျားကျပြန်တော့ သင်ပုန်းနေပါစေ သင့်ကို မတွေ့ တွေ့အောင် သူရှာပါလိမ့်မယ်။ သင့် အသံ မကြားမချင်း ရသည်အထိ ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျတော်တို့ ယောက်ျားတွေဟာ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဇွဲ အရမ်းကြီးသလို အတ္တ၊ မာနတွေကိုလည်း အဲမိန်းကလေး အတွက် မြေမြုပ် သက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျတော် ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးက အရင်ဆက်သွယ်လာရင်၊ လာတွေ့ခဲ့ရင် သူမကို မချစ်တော့တာ မဟုတ်ပေ မယ် ကျတော့် ပြောရင် သူမအချိန်မရွေး […]
အမျိုးသမီးပွဲတော် ရန်ကုန်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသမီးပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မှာ မတ် ၂ ရက်မှ ၈ ရက် အထိ သီတင်းတပတ်ကြာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့နေရာအနှံ့ကျင်းပမယ့် ဒီပွဲတော်မှာ အနုပညာပြပွဲတွေ၊ ဂီတပွဲတော်တွေ၊ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေနဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်အမျိုးသမီးပွဲတော် ကျင်းပရေးအဖွဲ့က ဒေါ်ယမင်းအေး က ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။ ဒီပွဲကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ယမင်းအေးက “မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍကို မြှင့်တင် ချင်တာပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီနေ့ လူနေမှုဘ၀ပေါ်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်၊ အတတ် ပညာရှင်တွေရဲ့ ခံစားချက်အမြင်တွေ မျှဝေပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့လုပ်တာ။”လို့ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေဟာနေရာစုံမှာ အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြသချင်တာဖြစ်တဲ့ အကြောင်း နဲ့ ဒီပွဲတော်မှာ အမျိုးသမီး အားလုံးပါဝင် စေချင်တယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ […]
ကျွန်မတို့ မိန်မသားတွေ ဆိုတာ အလွယ်တကူ ဝမ်းနည်း တတ်ပေမယ့် အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့ အခါမှ သတ္တိရှိရှိ ဖြေရှင်းရဲပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိန်မသားတွေ ဆိုတာ ချစ်ရင်လည်း တစ်ဘဝလုံးစာ ချစ်တတ်ပေမယ့် မုန်းရင်လည်း ဘယ်တော့မှ လှည့်မကြည့် တော့ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ မိန်မသားတွေဆိုတာ အားကိုးအားထား အလိုရှိကြပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝ ကိုတော့ လျောက်လမ်းနိုင် ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိန်မသားတွေ ဆိုတာ အလှအပကို မက်တတ်ပေမယ့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူ ကိုလည်း ကြံ့ကြ့ခံနိုင်ပါ တယ်။ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေ ဆိုတာ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစု ဘဝကို နှစ်သက်ပေမယ့် သစ္စာမရှိ တာကိုတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေဆိုတာ ငွေများများ ရအောင် မရှာပေးနိုင်ပေမယ့် မိသားစု အပေါ်မှာတော့ အမြဲ […]
ဆံပင်သန်၊ ဆံပင်ပြန်ပေါက်တဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးနည်းလေး ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ကြက်သွန်နီကို ရေလဲ သုံးတာပါပဲ။ ကြက်သွန်နီက ဆာလဖာဓာတ် ပါဝင်မှု မြင့်မားနေသည့်အတွက် မွှန်တဲ့ အနံ့တော့ရှိတယ်။ ဆံပင်မ ကျွတ်တော့တဲ့အထိ၊ ဆံပင်ပြန်ပေါက်တဲ့အထိဗောက်တွေပျောက်တဲ့အထိ သည်းခံ သုံးပေးနိုင်မယ်ဆို ရင်တော့ဘေးကင်းတဲ့ဆေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျန်းမာရေးသတင်းများ စာမျက်နှာမှ သတင်းစကား ပါးချင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်း (၁) ကြက်သွန်နီကို ထုထောင်း၊ ဘရန်ဒါနဲ့ကြိတ်ပြီး အ၀တ်သန့်သန့်ဖြင့် အရည်ညစ်ယူပါ။ (၂) အနံ့သက်သာပြီး အကျိုးအာနိသင်လည်း ပိုကောင်းလာအောင် သံပုရာသီး တစ်စိတ်လောက် ညစ်ထည့်ပါ။ (၃) ပျားရည် လက်ဖက်စားဇွန်းခန့် ရောစပ်ပါ။ ၄င်းကြက်သွန်နီအရည်နဲ့ ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးမယ်ဆိုရင်သွေးလှည့်ပတ်မှု တိုးတက်လာမယ်။ ကြက်သွန်နီထဲက ဆာလဖာဓာတ်ဟာ ဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုမယ့် ကော်လာဂျင်ကို ထုတ်ပေး တယ်။ ဘက်တီးရီးယားကို နိုင်နင်းတဲ့ […]
နှစ်ရှည်ဆေးလိပ် သောက်သူတွေအတွက် အဆုတ်သန့်ဆေး
နှစ်ရှည်ကြာ ဆေးလိပ်သောက်သူအများစုဟာ ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်နာ သို့မဟုတ် အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ချောင်းဆိုးဝေဒနာကို ခံစားကြရပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းက ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအကျင့်ဆိုးကို ထားခဲ့ဖို့ စိတ်မနိုင်ဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံး အဆုတ်သန့်စင်ဖို့အတွက်တော့ လုပ်နိုင်ပါ တယ်။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနဲ့ နနွင်းတို့ကို များများစားပေးပါ။ အဲဒါတွေဟာ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါဘယတွေကို ကောင်းကောင်း ကာကွယ်နိုင်တယ်။ နနွင်းမှာဆိုရင် ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို ခုခံပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေ ပါရှိပါတယ်။ ၄င်းမှာ Omega-3 အဆီအက်ဆစ်တွေ များစွာပါဝင်ပြီး ဒါကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အသုံးပြုပေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ကြက်သွန်နီ (၁) ကီလိုရေ (၁) လီတာသကြားအညို (၄၀၀) ဂရမ်နနွင်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၂) […]
၁။ သွေးလည်ပတ်မူကို ပိုမိုပြီး ကောင်းမွန်စေပါတယ် နံနက်ခင်းမှာ ရေအေးနဲ့ ချိုးတာထက် ရေနွေးနဲ့ ချိုးတာကို ပိုမိုပြီး သွေးလည် ပတ်မူကို အားကောင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြွက်သားများကို တောင့်တင်း သန်မာ စေနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း များစွာ အထောက်အကူ ပြုစေပါတယ်။ ၂။ ပေါ့ပါး လွတ်လပ်စေတယ် အိပ်ယာနိုးတဲ့ အခါမှာ ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်းကြီး ဖြစ်နေရင် မနက်ခင်း ရေချိုးလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပေါ့ပါးလွတ်လပ် သွားပါတယ်။ ၃။ ဖိစီးမူတွေကို သက်သာစေပါတယ် နံနက်ခင်း ရေချိုးခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမူတွေကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမူတွေ ဖြစ်နေခဲ့ရင် မနက်ခင်း ရေချိုးခြင်းက များစွာ အထောက်အကူ ပြုစေမှာပါ။ ၄။ ကြွက်သားများ […]